Perm volomaso - Izay rehetra ilainao ho fantatra | Bezzia
Per eyelash: Izay rehetra tokony ho fantatrao
Susana godoy | 13/09/2021 10:00 | beauty
Ny volomaso dia tsy maintsy hikarakara azy ireo foana koa, satria hanome antsika endrika misimisy kokoa amin'ny tarehy izy ireo ary satria ampahany lehibe amin'izany. Noho izany, ao anatin'ny fitsaboana izay ho hitantsika ho azy ireo dia manana ny volomaso perm. Mety efa naheno zavatra betsaka momba azy ianao izao.
Ary izao dia hofafantsika ny fisalasalana rehetra izay miteraka manodidina azy foana. Satria raha tianao mahazo endrika saika tsy manam-petra misaotra ny volomaso anao, avy eo eo amin'ny toerana mety ianao. Azonao antoka fa hampiaiky volana anao na aiza na aiza alehanao amin'ny fomba manokana toy izany.
1 Inona no atao hoe permy eyelash?
2 Mandra-pahoviana ny permy volomaso?
3 Inona no maha samy hafa ny manaisotra sy ny volomaso maharitra
Inona no atao hoe permy eyelash?
Azontsika atao ny milaza fa ny permy eyelash dia fitsaboana izay hikorontana. Marina fa tsy hahita azy ireo miaraka amin'ny onja isika, saingy antsoina hoe curling satria manamarika kokoa ny endrika misy effets curved. Tena ny vokany farany dia ho tsikaritray ny halavan'ny volomaso.. Ho an'ity dia mila karazana gel ianao izay hanamboatra ny fizotrany ary koa curlers na rollers. Izany rehetra izany dia manokana ho an'ity faritra ity, mazava ho azy. Ka ny valiny dia ho volomaso lava sy voajanahary kokoa, elaela kokoa. Noho izany, araka ny efa noresahintsika tany am-piandohana, dia hampiorina bebe kokoa ny masonao izany ary hankafy ny famaranana ara-nofo bebe kokoa ianao.
Mandra-pahoviana ny permy volomaso?
Ny tena marina dia fitsaboana maharitra adiny iray eo ho eo izy io, nefa haharitra mandritra ny fotoana maharitra. SATRIA afaka mandany 3 volana eo isika manao ny valin'ny permy volomaso. Marina fa hiseho ireo tabilao vaovao mandritra io fotoana io. Ka ny valiny dia mety miovaova kely, satria ny sasany ho hita ho olioly ary ny vaovao kosa, tsia. Noho izany, rehefa afaka roa volana dia tsara ny miverina any amin'ny foibem-pan hatsaranao hanome azy tanana vaovao. Efa fantatrao fa rehefa ampiharina ilay fitsaboana dia hita eo noho eo ny valiny, amin'izay dia hankafy ilay fijery manaitra tena tianao be ianao.
Inona no maha samy hafa ny manaisotra sy ny volomaso maharitra
Efa nilaza izahay fa ny permy eyelash dia fitsaboana hikororohana azy ireo. Inona no vokatr'izany dia manana iray amin'izany isika toa antsoina hoe XXL. Raha efa manana volomaso lavalava ianao dia ho mety aminao satria azonao omena endrika bebe kokoa ary voajanahary tanteraka ny vokany.
Mazava ho azy rehefa miresaka momba izany isika fananganana volomaso miresaka fitsaboana iray ho an'ny olona somary somary fohy ny volomaso. Satria io fizotran-javatra io dia mahatonga azy ireo hivelatra fa avy amin'ny tapany fakany, izay mamela antsika ihany koa ny vokatr'ilay volomaso lava. Noho izany ny perm dia hanome azy ireo famaranana kely miolaka ary ny fisondrotana dia hamelatra azy ireo tanteraka. Hafa ihany koa ny fizotrany, satria ao amin'ny perm dia ilaina ny curlers sy ny gel fixing fa amin'ny fiakarana dia misaraka ny volomaso, manomboka amin'ny fotony napetraka ao amin'ny faritry ny hodi-maso.
Azontsika lazaina izany fitsaboana samy hafa avokoa izy rehetra, izay azonao andramana amin'ireo tranga roa ireo, satria tsy maintsy mahita izay tena ilainao na izay tianao indrindra ianao. Noho izany, tsy voatery ho iray manokana ho anao izy io. Azonao atao ny misafidy ny hamela ny tenanao hitondran'ny roa anao hahita hoe iza no misy ny vokatra tsara indrindra amin'ny tavanao. Avy aminy, ny tokony hataonao dia ny manisy karazana hydration amin'ny volomaso mba hikarakarana ny fizotrany, toy ny menaka mitete, tsy mila mascara ianao satria ho tsara tarehy irery ny bika aman'endrinao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Per eyelash: Izay rehetra tokony ho fantatrao
Sakafo 5 hanatsarana ny fifindran'ny tsinay
Pedikiky matihanina: Ahoana ny fomba anaovana azy tsikelikely